Aingam-panahy amin'ny sabotsy | Martech Zone
Sabotsy, Martsa 3, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ny zanako lahy, Bill, dia mitarika ny famokarana feo ho an'ny zava-bitany High School an'ny The Wizard of Oz. Ny zanako vavy dia ho ao koa, milalao iray amin'ireo munchkins. Katie dia efa nahazo fanamarihana mahafinaritra nataon'ny olona teo amin'ny lalao… mahafinaritra tokoa satria tao amin'ny Middle School izy! Nivelatra ho azy ny nahafahany niditra an-tsehatra aza. Tiany tanteraka anefa izany. Talanjona foana aho amin'ny talentan'ny zanako roa.
Araka ny azonao an-tsaina, ny androko sy ny alina izao dia feno hira avy amin'ny Wizard of Oz. Ny zanako lahy dia nanoratra indray ny hoe "Raha mba nanana foko aho" ho lasa kinovaiko ankehitriny. Tsy nanao an'izany tany ivelan'ny trano anefa izy. Te hanome aingam-panahy kely azy aho haka ny gitara ary hitendry azy mandritra ny fiatoana amin'ny fanazaran-tena anio.
Rehefa nahita ity horonantsary ity tao amin'ny 3R.Medium aho dia nasehoko azy ary nanentana azy hitondra ny gitara ho eo am-panaovana famerenana anio. Ny zanako lahy dia tsy manana olana amin'ny fialamboly vahoaka… fa tsy ny vahoaka izay tsy mahalala akory izay ho avy. Alao an-tsaina ny fampisehoana amin'ny metro any Paris! Izany no nataon'ireto olona mana-talenta mampino ireto:
Angamba hanome aingam-panahy anao izany! Nanentana ny zanako lahy io!
PS: Omaly alina koa aho Bill hofan-trano Ilay Wiz amin'izay dia afaka mahazo fiovan'ny hafainganana isika. 😉
Ahoana no nandevenana ahy an'i Digg (Ny hadisoako)
Mar 3, 2007 ao amin'ny 1: PM PM
Tsy manan-talenta mozika aho fa te handeha foana amin'ny toerana iray ary mamily ilay reny, novonoiko i Quincy Jones, tsimoramora ny maso mba hijery an'ity, eritrereto fotsiny Doug, mety ho ianao ity, izaho sy i Chris no midina EL any Chicago, avelao izy hanandrana. hevitra tsara kokoa, ianao sy i Chris no manandrana azy ary hotazoniko ilay cam viedo! asa tsara
Mar 4, 2007 amin'ny 10: 56 AM
Miaraka aminao aho amin'izany JD! Afaka mitondra naoty aho ary afaka nandihy tokony ho 100 lbs lasa izay. Tsy mitsahatra miteny amin'ny zanako lahy aho rehefa manankarena sy malaza izy fa hiara-mihira hira iray farafaharatsiny miaraka aminy eny an-tsehatra.
Mieritreritra aho fa manahy izy. 🙂
Mar 3, 2007 ao amin'ny 4: PM PM
Nonpoint dia manana kinova rock mahafinaritra an'ny Feel it (eny amin'ny rivotra anio alina) koa.
Mar 4, 2007 ao amin'ny 7: PM PM
Miala tsiny fa làlana miafina tamin'ny famotsoran'i Mushroomhead io
Iza ilay rakikira? Ny zanako lahy dia tia Mushroomhead taloha. Mpankafy an'i SlipKnot aho… indrindra amin'ny fifamoivoizana ary te-hamoaka ny hatezerako aho. Na io na Malaza be (mihaino ny zava-drehetra aho!).
Mar 3, 2007 ao amin'ny 9: PM PM
Hey – Tena tiako ilay vondrona. Misaotra nizara azy. Ny zavatra hafa rehetra dia mbola mihoatra ny lohako ihany! (ps. Mila miteny amin'i Mike aho mba hahazo zavatra bebe kokoa amin'ny tranokalany!)